San Expedito «Munamato» † 【Patron weZvinokurumidza Zvikonzero】
Ngano inoti kunyangwe aive musoja wechiRoma, mutsigiri akasimba weHumambo, rimwe zuva moyo waSaint Expeditus wakabatwa nenyasha dzaMwari, achitendeukira christianity.
Zvinoita sekudaro panguva chaiyo yekutendeuka kwake dhimoni rakazviratidza kwaari muchimiro chegunguo nechinangwa chekumunyaradza, kupopota kwaari "Cras, cras, cras", zvinoreva kuti muchiLatin "mangwana, mangwana, mangwana."
Haa mupfupi kana simbe, mutsvene mubvunzo akaita zvine simba ndokupwanya gunguo richidaro nekudzokorora "Hodie, hodie, hodie", zvinoreva muchiLatin "nhasi nhasi Nhasi". "Hapana chandinosiya mangwana, kubva nhasi ndichava muKristu ", Akakwenya. Kutaura kwakasimba kwakamuwanisa zita remusande uyo anopinda mumatambudziko ekukurumidza.
1 Ndiani mutsvene anosangana nezvinonyanya kudzvanya?
2 Iye mutsvene ane zita rinoreva kuti "nekukurumidza" aivapo zvechokwadi here?
3 Nhau yakaitwa yakakomberedza musoja wemauto eRoma "Fulminante"
4 Zita rezita rekuti San Expedito rinorevei
5 Sei musande aive legionary yeRoma anomiririrwa
6 Maitiro ekubvunza iwo Wechidiki Mushandirwi
6.1 Munamato kuna Saint Expedito nekuda kwezvikonzero zvakarurama uye zvinokurumidza
6.2 Vhidhiyo nemunamato kuna Saint Expedito:
Ndiani mutsvene anosangana nezvinonyanya kudzvanya?
Uyu mutsvene angadai aive murume wemauto eRoma aigara pakutanga kwezana ramakore rechina, achiita chinzvimbo chemukuru wemauto eRoma munguva yaEmperor Diocletian.
Zvimwe zvinyorwa zvinomuisa semunhu akararama panguva yaSaint Philomena uye vanosimbisa kuti kuurairwa kutenda kwake kwakaitika musi waApril 19, 303. Kunyangwe iye ari mutsvene anozivikanwa nevakatendeka veKaturike, haaoneke mumatare echiKaturike.
Kana chiri chiito chake chekugadza, hachina kuongororwa neChechi yeKaturike uye kunyangwe Kubvumbi 19 ndipo panopembererwa San ExpeditoChokwadi ndechekuti bato iri harizivikanwe zvakanyanya.
Iye mutsvene ane zita rinoreva kuti "nekukurumidza" aivapo zvechokwadi here?
Sezvo zvinoshamisa sezvazvingave zviri kuvapo kwemusande uyu kuchiri kubvunzwa. Kwakatangira iko kuzvipira kwakadzokera kuna 1781, apo bhokisi riine zvisaririra zvisingazivikanwe rakagamuchirwa mumusangano weParis.
Izvi zvisaririra zvaizove zvakafukunurwa kubva kumakuva emakona eruwa Denfert-Rochereau. Ichokwadi kuti mutumwa, weguta rimwe chete, akanyora pabhokisi izwi "Spedito" (iyo inoshandura kuti "taura tsamba"), nechinangwa chekumhanyisa kutumira kwavo, zvakaita kuti masista vafunge kuti zvisaririra ndezvomumwe munhu anonzi "San Spedito".
Zvisinei iye Kufira kutenda kweRoma akatumidza zita risingazivikanwe kufira kutenda uyo zita rake raizonzi Expeditus, uye ane chirevo chinonzi Expediti, masista akafungidzira kuti vaive pamberi pezvasara zvemufira chitendero uyo akaonekwa mune hukama hwakadai. Kubva panguva iyoyo zvichienda mberi, vakanamatira kuti amureverere. Minyengetero yake payakapindurwa nekukurumidza, kunamatwa kwemunhu mutsvene kwakapararira munyika yese yeFrance.
Yakanga isiri nguva refu zuva risati rapihwa, rinoenderana nezana ramakore rechina, kuitira kuti riipe verisimilitude. Inofungidzirwa "Gweta rezvisingaite zvikonzero" zita raanogovana naSanta Rita uye naro Mutsvene Judha Thaddeus.
Nhau yakaitwa yakakomberedza musoja wemauto eRoma "Fulminante"
Ichokwadi ndechekuti kubvira kupera kwezana ramakore gumi nemasere uye pamwe kunyangwe pamberi pazvo, nyaya yakagadzirwa pamusoro pemutendi uyu asinganzwisisike.
Izvi ndizvo zvazviri, angadai akave mutungamiriri weXII Roman Legion, ane zita remadunhurirwa rekuti "Fulminante", achipihwa zvechiuto izvo zvaakatamba. Yakanga yakavakirwa mudunhu reMelitene (Kapadhokiya), yava kunzi Malatya (Turkey), chigaro cheimwe yematunhu eRoma eArmenia, pakupera kwezana ramakore rechitatu.
Boka iri raiumbwa zvikuru nemauto echiKristu, ane chinangwa chikuru chaive chekudzivirira kwemuganhu wekumabvazuva kwenzvimbo dzakapinda nemaRoma vachirwisa kurwisa kwevaHuns.
Hupenyu hwaEppedito asati atendeuka ungadai wakaparara. Mushure maro, akaparidzira kuboka rese, achivaunza padyo nechiKristu. Mamiriro ezvinhu aya anofanira kunge akatsamwisa Emperor Diocletian, nekuti kukosha kwechinzvimbo chake kwakamuisa mumharadzano dzemutungamiri wenyika. Zvinotendwa kuti aigona kunge akarohwa uye akazogurwa musoro nebakatwa.
Zita rezita rekuti San Expedito rinorevei
Izita rine zvirevo zvemauto. MuchiSpanish, expedito chirevo chinobva muchiLatin expeditus icho chinoreva sununguka pazvipingamupinyi zvese uye gadzirira kuita.
MuRoma Yekare zvainzi masoja aifora kufambisa kana muexpeditionem pavaingozviita chete nezvombo zvavo uye vasina nhumbi. Pane kupesana, vaifora mhedheni chero nguva pavaiita saizvozvo nechavaitadzisa, pfungwa yaisanganisira bhegi rekurara, midziyo yekudya, maturusi eshangu, mitezo yemunhu, chikafu nemidziyo.
Izwi rekuti expediti raishandiswawo kureva kugadzirwa kwechikwata chakaitendera kuti chishande sechiedza chevacheche, chakapihwa kumhanya kukuru mukufamba kwayo. Zvichida ndipo panobva zita rekuti San Expedito, kana kuti iye musande akatanga basa rake remauto muchikamu chakatevera iwo iwo ma parameter, kwaangave akawana zita rake.
Sei musande aive legionary yeRoma anomiririrwa
Mifananidzo yemusande uyu inomupa muhembe dzechiRoma, akapfeka nguwo pfupi uye nejasi rakakandirwa kumashure kubva pamafudzi, fashoni yechiuto yenguva.
Chimiro chake ndechehondo. Mune rumwe ruoko rwake akabata shizha remuchindwe semucherechedzo wekufira kutendeka uye mune rimwe muchinjikwa unoratidza izwi "Hodie", "Nhasi" muchiLatin, semuripo kune ngano yambotaurwa. Netsoka yako yekuruboshwe unotsika pane gunguo riri kuchema "Cras", "Mangwana" muchiLatin.
Maitiro ekubvunza iwo Wechidiki Mushandirwi
Kunyangwe San Expedito achizivikanwa pasi rese nechipo chake chinoshamisa kugadzirisa zvishuwo zvinonyanya kukurumidza, iye zvakare Mutariri weVadiki Vechidiki, Murevereri mune Maitiro uye Miedzo, Rubatsiro rweVadzidzi, Hutano hweVanorwara neMudziviriri muMhuri, Vashandi uye Hutano Maitiro. Bhizinesi, mukuwedzera pakukwanisa kukumbirwa mune zvimwe zviitiko.
Munamato kuna Saint Expedito nekuda kwezvikonzero zvakarurama uye zvinokurumidza
“Wangu Musande Expedito wezvakanaka uye zvinokurumidza zvikonzero, ndirevererei pamwe chete naIshe Wedu Jesu Kristu, kuti agouya kuzondibatsira munguva ino yekutambudzika nekupererwa.
Wangu San Expedito iwe ndiwe Murwi Mutsvene.
Iwe ndiwe Mutsvene wevanotambudzika, Iwe uri Mutendi weasina tariro, Iwe uri Mutsvene wezvikonzero zvinokurumidza, ndidzivirire, ndibatsire, undipe: simba, ushingi uye kudzikama.
Chengetedza yangu odha! (ita kuronga).
Wangu San Expedito, ndibatsirei kukunda aya maawa akaoma.
Ndidzivirire kune avo vese vangandikuvadza, chengetedza mhuri yangu.
Chengetedza chikumbiro changu nekukurumidza.
Ndidzorerei Runyararo nerunyararo.
Wangu San Expedito! Ndichaonga hupenyu hwangu hwese uye ndichaparadzira zita renyu kune vese vane Rutendo.
Vhidhiyo nemunamato kuna Saint Expedito: